मध्यपहाडी लोकमार्ग : रुकुम खण्ड ‘ग्रीन रोड’ बनाउने अभियान
रुकुम (अस) । मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत रुकुम खण्ड ‘ग्रीन रोड’ बनाइने भएको छ । रुकुमपूर्वको भुमे गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने सडकमा प्राकृतिक हरियाली कायम गर्न लागिएको हो । रुकुमपूर्वको भुमे गाउँपालिकामा पर्ने मध्यपहाडी लोकमार्गमा ‘सफा, स्वच्छ र हरियाली भूमे’ अभियान अन्तर्गत बिरुवा रोप्ने काम शुरू भइसकेको छ ।
‘सडक छेउछाउमा धुपी सल्लाका बिरुवा रोप्न थालिएको छ,’ भुमे गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसुर बुढामगरले भने । पहिलो चरणमा गाउँपालिकाका वडा नं १ र २ मा पर्ने सडकमा बिरुवा रोपिएको उनले जानकारी दिए । बाँकी भागमा सडक कालोपत्र नभएकाले तत्काललाई वृक्षरोपण गर्न नसएिको उनको भनाइ छ । ‘गाउँपालिकामा पर्ने सबै सडक खण्डमा क्रमशः काम गर्नेछौं,’ उनले भने ।
सडकमा हरियाली तथा सुन्तरता कायम गर्न धुपीको बिरुवा रोप्नु उपयुक्त हुने ठहर गाउँपालिकाले गरेको थियो । सोहीअनुसार काम अघि बढाइएको अध्यक्ष बुढाले बताए ।
‘गीन मार्ग’ बनाउन चालू आर्थिक वर्षमा रू. ५ लाख विनियोजन गरिएको भुमे गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । पहिलो चरणमा गाउँपालिकाका वडा नं १ र २ लाई १÷१ लाख र वडा नं ३ र ४ लाई रू. ५०/५० हजार दिइएको छ । वडा नं १ मा पर्ने सडक खण्डमा जनश्रमदानबाटै करीब ४ हजार बिरुवा रोपिएको वडाध्यक्ष रामचन्द्र पुनले बताए । ५ हजार ७ सय बिरुवा रोप्ने भनिए पनि सडकको कालोपत्र नसकिएका ठाउँमा बिरुवा रोप्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
साविक काँक्री गाविसका ७, ६, ५ र ४ नम्बर वडाका बासिन्दाले श्रमदानबाट बिरुवा रोपेका छन् । साविकको वडा नं ९ मा १ हजार ७ सय बिरुवा रोप्नुपर्नेमा सडक कालोपत्र नभएकाले काम रोकिएको छ । वडा नं २ मा कालोपत्र भइसकेको सडक खण्डमा २५ सय बोट बिरुवा रोपिएको छ । ३ र ४ नम्बर वडाले भने सडक कालोपत्र भइसकेपछि मात्र बिरुवा रोप्ने भएका छन् । त्यहाँ चिउरीको बिरुवा रोप्ने तयारी छ ।
भुमे गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षलाई ‘वृक्षरोपण वर्ष’ मनाइरहेको छ, जसअन्तर्गत गाउँपालिकाका प्रत्येक नागरिकले कम्तीमा १० बिरुवा रोपेर योगदान गर्नुपर्नेछ । ग्रीन मार्गसँगै मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास फूड कोरिडोर समेत सञ्चालन गर्ने योजना गाउँपालिकाको छ । किसानको दिनचर्यालाई आयआर्जनमा जोड्न फुड कोरिडोर योजना अघि सारिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुढामगरले बताए । यसका लागि स्थानीय बासिन्दालाई कागती, सुन्तला, केरा र अनारका बिरुवा पनि वितरण गरिएको उनको भनाइ छ ।